Sefo distrika sy Prefe Homanina hangala-bato ?
Lalatiana Rakotondrazafy Mihantsy ady amin’ny MAPAR ?
Handrotsaka kandida depiote any Antsirabe, Tsiroanomandidy, Toamasina, Fenoarivo Atsinanana, Sainte Marie, Manakara,
Lisi-pifidianana Nanesorana anarana maherin`ny 200 000 isa…
Nifarana ny zoma 15 febroary lasa teo ny fandraketana ny anarana anatin`ny lisi-pifidianana ary hatao ny sonia hamaranana vonjimaika ny lisi-pifidianana eny anivon`ny rantsamangaikan`ny CENI amin`ny distrika (CED), ny 28 febroary ho avy izao.
Marc Ravalomanana Voaporofo fa marina hatrany ny teniny
Maro no efa nahatsapa fa marina ary tsy azo lavina ny tenin’i Marc Ravalomanana, mila mifampiresaka, ampanginina ny hambom-po vao afaka tena miroso amin’ny fampandrosoana.
Antenimierandoholona Miankina amin`ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ny hoaviny
« Zava-dehibe ny fisian`ny loholona ary ilaina ny fifandanjan’ny fahefana mpanatanteraka sy mpanao lalàna izay misaraka mazava tsara ao anatin`ny lalàmpanorenana », hoy ny loholona Ramparison Luc.
Fandrotsahana kandida depiote Mila mailo ny TIM sy K25
Kihon-dàlana iray lehibe hahafahana mametraka ny fifandanjan-kery ara-politika eto amin’ny firenena ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy azo lavina fa ny “TIM.K25”
Vahoaka any amin’ny faritany Manomboka mimenomenona amin-dRajoelina
Tsy voasoratra any anaty lalàna, saingy efa naman’ny nipetraka ho lamina mandeha ho azy teto amintsika ny fifandanjana ara-paritra na ny “équilibre régionale” amin’ny fitsinjaran’ny fahefana.
Andry Rajoelina Te hanadio tena eo imason`izao tontolo izao
Fanadiovan-tena. Mazava ny resaka fa te-ho filoham-pirenena hadio i Andry Rajoelina. Niniana tsy nolazaina avokoa anefa ireo tranga tena niteraka ny krizy politika teto amintsika, indrindra fa ny fahapotehan’ny toekarena, izay nampiaiky volana ny maro fa tena ho sarotra ny hanarina azy.
Nantsoin’ny filoha Rajaonarimampianina teny Iavoloha ireo Lehiben’ny distrika, Prefe manerana ny nosy ny faran’ny herinandro teo, ary tsy vao voalohany io.
Ambara fa ny resaka fanamafisana ny tany tan-dalàna, ny fitantanana mirindra sy mahomby, ny fanajana lalàmpanorenana ary ny ady amin'ny fahantrana no antony. Voizina hatrany ny "Fisandratana 2030", izay tsy fantatra na programam-panjakana na programan’ny filoha amin’ny fifidianana, raha hirotsaka hofidiana izy. Ny mampiahiahy dia sao tetika hanomankomanana sy hametrapetrahana ny resaka fampiasana ireto olom-panjakana ambony ireto hangalaram-bato sy hanararao-pahefana izany amin’ny fifidianana ? Vao ny 25 jolay teo ny minisiteran’ny atitany no nandefa naoty fampahatsiahivana mikasika ny tsy tokony hitanilan’ny mpiasam-panjakana ambony ara-politika na ny “neutralité de l’Etat”. Tsy tako-nafenina anefa ny resaka antsojay politika nampiasana ireo tompon’andraikitra ireo lehiben’ny distrika, nanaovana antsojay ireo heverina ho mpifanandrina politika amin’ny HVM, indrindra fa talohan’ny naharavan’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ny lehiben’ny faritra izay solontenam-panjakana ihany koa, dia iaraha-mahalala fa efa natao “coach” ho an’ny antoko HVM avokoa. Ampiasaina hisompatra ny kandida hafa aza, toy ny natao an’i Marc Ravalomanana tany Ambatondrazaka ny herinandro teo. Aiza ho aiza amin’izany ilay tsy fitanilan’ny fanjakana ? I Rivo Rakotovao izay handray ny fahefana amin’ny fotoana hialan’i Hery Rajaonarimampianina raha ho kandida aza moa efa nilaza tsy maharesy azy ny hafa fa izy ireo no mpandresy. Hiasa mafy izany ny lehiben’ny distrika sy Prefe ho amin’ny fandresen’ny HVM ?